သစ်သီးများရဲ့နတ်သမီး ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
Saturday, March 23, 2013 Taunzalat
ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူ ဖြစ်စေသည့် Healthy Foods Recipes မှာ(Health Benefits Of Papaya) အကြောင်းလေး
နဲ့ အတူ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ် လွယ်ကူစွာပြုလုပ်နိုင်မယ့်သင်္ဘောသီးဖျော်ရည်
သင်္ဘောသီး ကို တချို့နိုင်ငံတွေက ဆိုရင် အသီးများရဲ့ နတ်သမီး လို့တောင်တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူရဲ့ထူးကဲတဲ့အရသာရယ်၊ လှပတဲ့ အရောင်နဲ့ လန်းဆန်းသွားစေတဲ့ သူ့ရဲ့ အမွှေးနံသာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
သဘောင်္သီးကို ဘာလို့Healthy Food မှာ ရွေးချယ်ရလဲဆိုရင် သင်္ဘောသီးမှာ ပါဝင်တဲ့The Digestive Enzyme Papain ဓာတ်အားဟာ အစာကို ကြေလွယ်အောင် ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ Antioxidant ကိုသင်္ဘောသီး ထဲမှာ တွေ့ရှိနိုင် ပါတယ်။ နောက် ဗ်ီတာမင် စီ၊ ဗ်ီတာမင်အီး၊ နှင့် Beta-carotene တို့ဟာ ရောင်
ရမ်းနေခြင်းများကိုလျော့စေပါသည်။ ထို့အပြင် သင်္ဘောသီးထဲမှာ ပါဝင်တဲ့
Folate ၊ ဗီတာမင်စီ ၊ ဗီတာမင်အီး၊Beta-Carotene တို့ဟာ Colon Cancer မဖြစ်ရန် ကိုလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ မအီမသာဖြစ်ခြင်း၊ ပျို့ချင်၊ အန်ချင်ခြင်း (ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီးများနှင့်ခရီးသွားများ ကားစီး၊ ရထားစီး၊ လေယာဉ်စီး) မူးမော်တတ်သူများအတွက်လည်း သင်္ဘောသီး ကိုစားသုံးခြင်း ဖြင့် ကာကွယ် ပေးနိုင်ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားမယ့် နေရာ တော့ရောက်လာပါပြီ။ အိမ်ထောင်သည် များအတွက်လည်း အထူးကောင်းမွန်ပါ တယ်။
သင်္ဘောသီးထဲမှာပါဝင်တဲ့Arginine ဆိုတာယောက်ျားများအတွက် သား သမီးယူရန် အထောက်အကူပြုသော ဒီဓာတ်အား ဟာ သင်္ဘောသီးထဲမှာ ပါဝင် ကြောင်း ပြောပြပါရစေ။
သင်္ဘောသီးအမှည့်ကို စားသုံး မယ်ဆို လျှင် ၀မ်းချုပ်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပါ တယ်။ အရမ်းအမှည့်လွန်သော သင်္ဘောသီးကို စားလျှင်တော့သူ့ အထဲမှာ ပါဝင် သော ဗီတာမင်များ ပျက်သွားတတ်ပါ သည်။ သင်္ဘောသီးအစေ့သည်လည်း ဆေးဖက်ဝင်ပါသည်။ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဇွန်းစာလောက်ကို ပျားရည်ဖြင့် ရော စားလျှင် သန်ထတာကို ကောင်းမွန်စေပါ တယ်။ ခါးတဲ့အရသာရှိပါတယ်။ အခု အခါ မှာ သင်္ဘောသီး ကို နိုင်ငံ တော်တော် များများမှာ ကျန်းမာရေးအတွက်စားသုံး ရုံတင်မက သင်္ဘောသီးနှင့် ပြုလုပ်ထားသော ခေါင်းလျှော်ရည်၊ ဇရာကိုကာကွယ်တဲ့ အလှကုန်ပစ္စည်း(Anti-Aging Products) နှင့် အသားအ ရည်ထိန်းသိမ်းတဲ့ပစ္စည်း (Skin Care Products) တွေမှာပါ လူတွေ အသုံးပြု
လာတာကို တွေ့ ရပါတယ်။
ဟင်းချက်လို့အသားများကို နူးအိ စေချင်ရင်လည်းသင်္ဘောသီးစိမ်းနဲ့အရင် ဆုံး နှပ်ထားပေးပါ။ နူးအိပြီး အရသာရှိရှိ အချိန်တိုတိုနဲ့ဟင်းတစ်ခွက်ရရှိမှာပါ။
သင်္ဘောသီးကို စားလျှင် ကောင်းကျိုးရှိသလို၊ ဆိုးကျိုးလည်းရှိပါတယ်။ သင်္ဘောသီး သုံး၊ လေးရက် ဆက်တိုက် မစားသင့်ပါ။ အစာအိမ်နှင့် အူတို့ကို အားတိုးစေတဲ့(Tonic Effect )ဖြစ်စေပါတယ်။
သင်္ဘောသီးဟာ စားပွဲပေါ်က မြိန် ရာ ဟင်းတစ်ခွက် ဖြစ်နိုင်သလိုအချိုပွဲ တည်းဖို့လည်း အင်မတန်သင့်တော်ပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့လိုက်လျောညီထွေ စားသုံး နိုင်သောသင်္ဘောသီးအကြောင်းကို အားလုံးအတွက် အမှတ်တမဲ့မှနေ အမှတ် တရ ဖြစ်စေ မယ်လို့ထင်ပါတယ်။
www.naturalnews.com မှ သင်္ဘောသီး အကြောင်းကို ပြန်လည်ကိုးကားတင်ပြထားပါသည်။
ပျော်စရာ သင်္ဘောသီးရေခဲချောင်း(Fun Papaya Healthy Popsicle (Ice-Pop))
၁။ သင်္ဘောသီးအမှည့်- လက်ဖက်ရည် ပန်းကန်လုံး၂ ခွက် (အတုံးလေးများ)
၂။ ပျားရည် - စားပွဲဇွန်း ၂ ဇွန်း
၃။ လိမ္မော် သီးဖျော်ရည် - တရုတ် ပန်းကန်လုံး ၁ခွက်
၄။ Cide၊ သံပရာ(Optional)
၁။ ပါဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးကို Blenderထဲ မှာထည့်၍Smooth ဖြစ်သည်အထိ မွှေပေးပါ။
၂။ ရလာသော အရည်ပျစ်ကို ရေခဲတုံးခဲတဲ့ ပုံစံခွက်ထဲသို့ထည့်ပြီး ၄ နာရီ (သို့)တစ်ညထားပြီးခဲပါ။(ပုံစံခွက်မျိုးစုံ လှလှလေး(သို့) စိတ်ဝင်စားစရာ ပုံစံခွက်များကိုအသုံးပြုလျှင် ပိုစိတ်ဝင်စားစရာIce-Pop လေးဖြစ်မှာပါ)။ ရရှိလာသောအသီးဖျော်ရည်ခဲအတုံးလေးတွေကို ဖျော်ရည်ထဲ၊ အသီးစုံ အသုပ်ထဲလည်းထည့်သုံးဆောင်နိုင်သလို ဒီအတိုင်း ရေခဲချောင်းလိုလည်းစားသုံးလို့ရပါတယ်။
**မှတ်ချက် - လိမ္မော်သီးဖျော်ရည်၊ Cider ၊ သံပရာ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ဖျော်ရည်ကို လည်း၂မျိုးရောဖျော်လို့ရပါသည်။ (ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်စွာ စားသုံးချင်လျှင် ဖျော်ရည်မထည့်ဘဲ သဘာဝအသီးဖျော်ရည်ခဲတုံးများကို ဖျော်ပေးပါ)။ သဘာဝအသီးလေးဖြင့် ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်စွာ ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် လူကြီး လူငယ်မရွေးစားသုံးရင် ပျော်ရွှင်မှုကို ရရှိမှာ ပါ။
သင်္ဘောသီးသံပရာဖျော်ရည်ခဲ (Love Me! Papaya – Lime Fresh Frozen Juice )
၁။ သဘောင်္သီးတုံးသေး (Dice Ripe Papaya) - လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်လုံး ၁ ခွက်
၂။ Cider - လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်လုံး၂ ခွက်
၃။ သံပရာရည်(Fresh Lime Juice) - စားပွဲဇွန်း ၂ ဇွန်း
၄။2Piece Heart Shape Papaya For Garnish - ၂ တုံး
၅။ သဘောင်္သီးဖျော်ရည်ကို ခဲထားသောသင်္ဘောသီးဖျော်ရည်ခဲ
(10 Cubes Frozen Papaya Fresh Juice) - ၁၀ တုံး
၆။ သကြားညို (Brown Sugar (Optional)) - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း
၇။ ဆား(Salt (Optional))
၁။ ပထမဆုံး သင်္ဘောသီးကို အလုံးလိုက်ရေဆေးပါ။ ပြီးလျှင် အခွံခွာပါ။
၂။ ပြီးလျှင် ထက် ခြမ်းခြမ်းပါ။ ရလာသော ထက်ခြမ်းကိုထပ်ခြမ်းပေးပါ။ လေးမြှောင်း ရရှိမှာပါ။
၃။ သင်္ဘောစေ့များကို ဇွန်းဖြင့်ခြစ်ထုတ်ပြီးဖယ်လျှင် ပိုမြန်ပါတယ်။
၄။ ½ cm အတုံးအသေးလေးများတုံးပေးပါ။ ပုံစံလှလှလေးများတုံးပြီးလည်း အမှတ်တရအဖြစ် အလှဆင်လို့ရပါတယ်။
၅။ ပြီးလျှင် Blenderထဲကို ပါဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးထည့်မွှေပါ။ ပြီးလျှင်ပုံစံပြုလုပ် တုံးထားသောသင်္ဘောသီးတုံးလေးများကို နောက်ဆုံးမှထည့်ပါ။ ဆားနဲ့ သကြားကို နောက်ဆုံးမှာ ထည့်ပြီး မွှေပါ။
၆။ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ဖန်ခွက်လှလှလေးထဲမှာ သင်္ဘောသီးကိုဖျော်ပြီး အေးခဲ(Frozen)လုပ်ထားတဲ့ Frozen Papaya Cube လေး များ ကို ဖန်ခွက်ထဲထည့်ပြီးဖျော်ထားသော သင်္ဘောသီးဖျော်ရည်ကိုလောင်းထည့်ပါ။ပြီးလျှင်ပုံစံလှလှလေးလှီးထားတဲ့သင်္ဘောသီးအတုံးလေးနဲ့ဖန်ခွက်ကို အလှဆင်ပြီး တစိမ့်စိမ့်ခံစားသောက်သုံးရန် အသင့်ဖြစ်ပါပြီ။
U&Me! Papaya-Oatmeal & Yogurt Smoothies
၁။ ဒိန်ချဉ် (Plain Fat-Free Yogurt)- လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်လုံး၂ခွက်
၂။ သင်္ဘောသီး (Medium Size Ripe Papaya) - ၁ လုံး
၃။ နို့မှုန့် (Milk or Milk Powder) - စားပွဲဇွန်း ၄ ဇွန်း
၄။ Oatmeal - စားပွဲဇွန်း ၄ဇွန်း (City Mart မှာ ၀ယ်လို့ရနိုင်)
၅။ အဆီမတက်နို့ (Milk or Skim – Milk) (Low – Fat Milk)- လက်ဖက်ရည် ပန်းကန်လုံး၁ခွက်
၆။ သကြားညို (Brown Sugar) - စားပွဲဇွန်း ၁ ဇွန်း
(optional- if you want healthy drink leave sugar out)
(ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ရန် သောက်မယ်ဆိုရင်တော့ သကြားမထည့်ရင်ပိုကောင်းပါတယ်ရှင်)
၁။ ပထမ ဆုံး သဘောင်္သီးကို အလုံးလိုက် ရေဆေး ပါ။ ပြီးလျှင် အခွံခွာပါ။
၂။ ပြီးလျှင် ထက် ခြမ်းခြမ်းပါ။ ရလာသောထက်ခြမ်းကိုထပ်ခြမ်းပေးပါ။ လေးမြှောင်းရရှိ မှာပါ။
၃။ သင်္ဘောစေ့များကို ဇွန်းဖြင့် ခြစ်ထုတ်ပြီးဖယ်လျှင် ပိုမြန်ပါတယ်။
၄။ ၁-၂ စင်တီမီတာလောက်အတုံးလေးများတုံးပေးပါ။ထို့ နောက်အလှဆင်ရန် ½cm လေးတုံးထားပါ။
၅။ ပြီးလျှင်Blender ထဲကိုပါဝင်ပစ္စည်း တွေအားလုံးထည့်မွှေပါ။သင်္ဘောသီးတုံး ကိုနောက်ဆုံးမှထည့်ပါ။
၆။ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ဖန်ခွက်လှလှလေးနှင် သုံးဆောင်မယ်ဆိုလျှင်အမြင်ရော၊ အရသာပါ တကယ်ကိုစွဲငြိစေမှာ အသေအချာ ပါ။
• Syi Foodsgarden
Posted in: သင်္ဘောသီး/ရွက်/ဖျော်ရည်